Ogaden News Agency (ONA) – Gud. HAD mudane Cabdiraxman Madey oo ka dagay garoonka Perth
Gud. HAD mudane Cabdiraxman Madey oo ka dagay garoonka Perth
Posted by ONA Admin	/ March 16, 2012
Madaxa Hogaanka Arimaha Dibada ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa habiinkii xalay ahaa oo taariikhduna kubeegneed 15/03/12 soo caga dhigtay garoonka diyaaradaha magaalda Perth ee galbeedka Australia ayaa halkaasoo ay ooga hortageen kuna soo dhaweeyeen xubna ka socda jaaliyada Soomaalida Ogaadenia ee magaalada Perth. Dr Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi (Maadeey) oo baryahanba ku joogay booqasho shaqo gobolada Pacificga khaastana wadanka Australia ayaa halkaas kula kulmay masuuliyiinta Jaaliyada oo uu horkacayay Mudane Axmed Dalmar.
Dr Maadeey waxa uu kasoo kactimay magaalada Melbourne halkaas oo hogaamiyahu kulamo kala duwan uu kula soo yeesshay jaaliyada S.Ogadenia qaybaheeda kala duwan sida ururada bulshada iyo dhamaan masuuliyiinta jaaliyadaha asaga oo kulamadaas ooga waramay si qoto dheer xaalada halganka uu marayo iyo dhamaanba siyaasada geeska africa. Mudane Cabdiraxmaan ayaa jaalyada Melbourne ee halkaas uu kula kulmay kula dar daarmay in ay garab istaagaan halganka lagu xoreenayo dalka Ogadenia, kana digtoonaadaan tabaha khiyaamooyinka ah ee uu gumaysigu marwalbo kudayayo bushowaynta Ogadenia.
Hadaba Jaaliyada S.Ogadenia ee ku dhaqan galbeedka Australia oo baryahanba ka shintirinayay safarka Dr Maaday uu ku imanayo magaalada Perth ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalda Perth ayada oo lafilayo in uu shirar kala gadisan laqaadan doono dhamaan ururada bulshada ay jaaliyada kakoobantahay.
Safarka Dr Maadeey uu ku joogo magaalada Perth waxaad kala socon doontaa shabakada Ogaden News Agency (ONA)